The Good, the Bad and the Ugly (1966) မြန်မာစာတမ်းထိုး – Gold Channel Movies
Video Sources 9316 Views
The Good, the Bad and the Ugly (1966) မြန်မာစာတမ်းထိုး
For three men the Civil War wasn't hell. It was practice.Dec. 23, 1966Italy, United States, Spain, West Germany161 Min.TV-14
ကြာမြင့်ချိန် ၃နာရီနဲ့ classicရုပ်ရှင်ကြီးကိုကြည့်ရမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါ့မလာလို့ တွေးမိလိုက်ရင်တော့ သင့်အတွေးတွေလုံးဝမှားသွားနိုင်ပါတယ်
စွန့်စားခန်း (adventure)ဇတ်လမ်းမျိုးဖြစ်ပေမယ့် Cilent Eastwood နဲ့ Eli Wallach သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆရာကျတဲ့ ဟာသစကားလုံးတွေကြောင့်ကြည့်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေရသမျိုးစုံခံစားရပြီး ဇတ်လမ်းအစအဆုံး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇတ်လမ်းဇတ်ကွက်တွေနဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတွေ့ရမှာပါ
ပိုက်ဆံဆိုတာနတ်ဘုရားတစ်ပါးလို့ခံယူထားတဲ့The Good .The Bad .The Uglyဆိုတဲ့လူ ၃ယောက်နဲ့ ဒေါ်လာ၂သိန်း အရှုပ်တော်ပုံကြီးကိုဇတ်အိမ်ဖွဲ့ထားပါတယ်
နောက်ခံ တီးလုံးတွေ ပုံရိပ်တွေက ကြည့်ရှုသူကို ကြည့်ရင်းနဲ့ လွှင့်မျောသွားကာ တကယ့် ကောင်းဘွိုင်ခေတ်ကို ခေါ်ဆောင်သွားသလိုပါဘဲ
#တည်ကြည်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေယောကျာ်းဆန်တဲ့သတ္တိတွေနဲ့ပိုက်ဆံကိုဘဲအဓီကထားကာပိုက်ဆံကိုရှာနေတဲ့လက်ဖြောင့်သေနတ်သမား Blondie
#ယုတ်ညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ မကောင်းမူတွေကို တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန်ပြုလုပ်တက်တဲ့ကြေးစားလူသတ်သမား Angel Eyes
#ရာဇဝတ်မူပေါင်းများစွာက်ိုကျူးလွန်ထားပြီးနိုင်ငံတော်မှအလိုရှိနေတဲ့မကောင်းမူတွေကိုလုပ်ဆောင်ပြီးလောဘကြီးတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့အထီးကျန်သမားကြီး Tuco
The bad ဆိုသူ Angel Eyes ကတော့ထုံးစံအတိုင်းကြေးစားလူသတ်နေရင်းသတ်ရမည့် သူဆီမှဒေါ်လာ ၂သိန်းအကြောင်းကိုသိလိုက်ရပြီး သူရဲ့လောဘစိတ်ကြောင့်သတ်ခိုင်းတဲ့သူကိုပင်သစ္စာဖောက်ကာ သတ်ပစ်လိုက်ပြီးဒေါ်လာ၂သိန်းအကြောင်းကိုဘဲ တောက်လျှောက်စုံစမ်းနေပါတော့တယ်
Blondie ဟာ လမ်းမှာ Tuco နဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခု ထားရှိထားလိုက်တယ် အဲ့တာကတော့Tuco ကို အလို ရှိနေတဲ့ ရဲဌာနတွေဆီအပ်ဆုကြေးငွေယူ ပြီးရင် ကယ် ဆုကြေးငွေကို တစ်ယောက်တစ်ဝက်စီခွဲ ယူပြီး တစ်ဌာနပြီးတစ်ဌာနလိမ်လည်ကြတဲ့လက်တွဲဖော်တွေပေါ့
အဲ့သလိုနှစ်ယောက်သားလုပ်ကိုင်နေတုန်း ခရီးလမ်းတစ်နေရာမှာတော့သေတော့မည့်လူနာ ဒေါ်လာနှစ်သိန်းတည်နေရာကိုသိရှိထားတဲ့Bill Carson ကို တွေလိုက်တယ် Bill Carson ကလည်းသေတော့မည့် အတူတူ သူသိထားတဲ့ ဒေါ်လာ၂သိန်း တည်နေရာဖြစ်တဲ့ သချိုင်းနာမည်နဲ့ မြေစာပုံနာမည်ကိုပါပြောလိုက်တယ်
ဒါပေမယ့် Tugo က သချိုင်းနာမည်ကိုသာသိပြီး Blondieကလည်းမြေစာပုံနာမည်ကိုသာသိတယ်
Tuco ကလည်း Blondie ကိုသတ်လို့မဖြစ် Blondie ကလည်း Tuco ကို သတ်လို့မဖြစ်တော့ နှစ်ယောက်ပေါင်းကာ သိထားတဲ့ တည်နေရာကိုသွားပြီးဒေါ်လာနှစ်သိန်းကိုတစ်ယောက်တစ်ဝက်ခွဲယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်
အဲ့အချိန်မှာဘဲ Angel Eyes ကလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ဒေါ်လာနှစ်သိန်းတည်နေရာကိုသိတဲ့သူတွေမှန်းသိသွားတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဒေါ်လာ၂သိန်းအိမ်မက်ထဲဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်
ဒီတော့ The Good .The Bad .The Ugly စရိုက်မတူကျတဲ့လူသုံးယောက် ဒေါ်လာ၂သိန်းကိစ္စကိုဦးတည်နေကျတဲ့သူတွေဖြစ်တော့ လာဘကြီးတဲ့ Tugo ဘဲ Blondie ကိုသတ်ပစ်မလား ကောက်ကျစ်တက်တဲ့ Angel Eyes ကဘဲကျန်တဲ့နှစ်ယောက်လုံးအပေါ် ဂွင်ဆင်သွားမလား သူတို့သုံးယောက်သားဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ဒေါ်လာတွေ ကိစ္စဘယ်လို ဆက်ဖြစ်လာမလဲ သုံးယောက်သားဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကျပါဦးခင်ဗျ ……
Translated & Reviewed by Ar Ker Lin (14)
Size 1.5 GB/ 480 MB
IMDb Rating 8.9 587,546 votes
Download Google drive(SD) မြန်မာ 500 MB
Download Google drive(HD) မြန်မာ 1.5 GB
Download Openload (SD) မြန်မာ 500 MB
Download Openload (HD) မြန်မာ 1.5 GB
Legal Action (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Black 47 (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး
County Line (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Hostiles (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Painted Woman (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး
The Beguiled (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Justice (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး